Amin'ny taha mahavariana 25000 Rs, ny fifanarahana toy izany dia tsy mijanona misokatra maharitra. Io no fananana tonga lafatra azonao hofaina dieny izao. Ity misy fananana tsy maintsy jerena raha mitady fifanarahana mety any Ichhra ianao. Raha dinihina ny zava-misy tadiavinao fisaka, hoy izahay, Tapitra ny fikarohana anao. Tsy isalasalana fa ity no Flat tsara indrindra amin'ny fijerena ny vidiny sy ny faritra voasaron'ny 3,5 Marla, ka amandriho anio. Ity no faritra vaovao sy manintona indrindra ao amin'ny Ichhra ary tsy tianao ny tsy hahita fotoana hipetrahana eto ianao. Mifandraisa aminay izao, ary ny solontenanay dia hanome anao ny antsipiriany ilainao.